Lamaanaha ugu gaaban Aduunka!
Subject: Lamaanaha ugu gaaban Aduunka! Thu Jan 03, 2008 3:24 pm
Lamaane shiine ah ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin lamaanaha ugu gaaban aduunka. Lamaanahaas oo kala ah Li Tangyong iyo Chen Guilan ayaa lasheegay marka laysku daro dhererkooda inaanu kabadnayn180cm.
Haddase waxay lamaanuhu rajaynayaan in lagu daro buuga lagu kaydiyowaxyaabaha mucjsooyinka caalamka, isuna arka inay yihiin lamaanaha ugu gaaban. Li Tangyong ayaan kadheerayn 1m iyo 9cm halka alkuumadiisa Chen Guilan ay iyudu tahay 71cm sida ay kusoo warisay wakaaladda wararka ee Reuter.
Lamaanahan oo rabay ina ay sanado badan aqalgalaan, ayaa hadda waxay dareemayaan inay diyaar uyihiin inay qaadaan talaabadii ugu waynayd. Sababta ay mudadaan dheer aya usugayeen inay ahayd waalidkood oo aan uarag fikir wanaagsan saana waxaa yiri Li Tanyong. 5 oktobar oo ahayd jimcihii lasoo dhaafay lamaanaha iyo 30 lamaane kale ay diyaargarow aroos kaqayb galeen. Sanadan dabayaqadiisa ayey aqal-galidoonaan.
Subject: reply Topic: Lamaanaha ugu gaaban Aduunka! Tue Jan 08, 2008 1:55 am
, man look how happy they are , what i say ,i amma just happy for them........,thanks Admin